Godina Wallagga magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti mootummaan Wayyaanee maqaa walga’iitiin uummata doorsisaa jiraachuu Qeerroon gabaase. « QEERROO
Godina Wallagga magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti mootummaan Wayyaanee maqaa walga’iitiin uummata doorsisaa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Caamsaa 3,2017/ Mootummaan sirna nama nyaataa Abbaa irree Wayyaanee godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti kaabinoota isaaf amanamoo ta’an walitti qabuudhaan uummata amansiisuu qabdan jechuudhaan uummata magaalaa Naqamtee irratti hololaa fi afaanffajjiidhaan lafa cabsaa akka jiru ibsame.
Haaluma kanaan hundeen garboomffattuu ilmaan Tigiraayiin bu’uureffamte sirni Wayyaanee torban kana keessa guyyaa gaafa Caamsaa 04/2017 irraa eegalee hanga Caamsaa 05 /2017 tti sirni wayyaanee Godina Wallagga magaalaa Naqamtee galma guddicha kan magaalichaa keessatti kaabinoota isaaf bitamuun uummata gidirsaa turan walitti gurmeessuun uummata walitti qabdanii amansiisuu akka qabdan jechuun koonfireensii teessisaa akka jirutu eerame.
Wal ga’iin wayyaaneen magaalaa Naqamtee keessatti taasisaa jirtu kunis maqaa haqa dubartootaa irra deebinee haa yaadannu jedhuun jaleewwan sirna wayyaanee walitti tuuta’uun uummatarratti akka lafa dhiphisaa jirantu himame.
Addattimmoo mariin wayyaaneen magaalaa Naqamtee keessatti taasisaa jirtuf Barmaatiilee boodatti hafoo ta’an uummata keenya waliin qabsoofnee haa balleessinu maqaa jedhu da’oo godhachuun uummata wal ga’iidhaan oliif gadi kurkurssaa akka jirtutu gabaafame.
Hattoonni sirna wayyaanees heedduun isaanii koonffireensii magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa jiru irratti argamuudhaan uummata doorsisaa akka jirantu addeeffame.
Wal ga’ii sirna wayyaanee kanarrattis bulchaa bulchiinsa Godina wallagga bahaa kan ta’e namni maqaansaa Moges Ida’ee jedhamu dirqiin uummata magaalaa naqamtee dirqiin walitti qabee amansiisuuf uummatarratti dhiichisaa fi doorsisaa akka jiru maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamteerraa nu qaqqabe ibsee jira.
Torbanuma kana keessas gootowwan qeerroon magaalaa naqamtee jibba sirna wayyaaneef qaban irraa ka’uudhaan barruulee warraaksaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa facaasaa akka jiranis maddeen qeerroo itti dabaluun leeqaa irraa gabaasanii jiru.
Waraanni wayyaanees uummata Magaalaa Naqamtee galgala galgala daandiirra oliif gadi adeemuudhaan reebaa fi doorsisaa akka jirus madi oduu qeerroo gabaasee jira.
Mootummaan abbaa irree humnaa fi aangoo qawween kan biyya bulchaa jirtu guutummaa goleewwan oromiyaa keessatti maqaa wal ga’iitiin uummata doorsisuun bifuma wal fakkaatuun geggeeffamaa jiraachuu qeerroon gabaasaa jira.
Gochi wayyaanee kunis kufaattiin bara bittaa ishee daran saffisuu fi qarqara boollaa ga’uu ishee kan mullisuudha.
« Finfinne by Maaramee (R.I.P)
Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo,Wallee Haaraa Caamsaa 3,2017 »